Kubatsira, mashandisiro uye mutengo wesimba remhepo muSpain | Green Renewables
simba re hydraulic
Simba remvura yegungwa
Thermal zuva simba
ChiGerman Portillo | | Simba rekuchengetedza
Tiri kuramba tichiedza kudzikisa mitengo pamhepo inodziisa mumba medu kana muzvivakwa. Uye ndezvekuti kuve wakasununguka munzvimbo yakagadzikana kunofanirwa kuve kwakachipa nekuda kwekufambira mberi kwetekinoroji. Kana pamusoro peiyi mhepo inotonhorera ichibva matsimba emagetsi anovandudzwa zvirinani. Nhasi ticha tarisa pamabatiro azvinoita mhepo uye chii mutengo.
Iwe hauzive kuti chii chinonzi aerothermal chiripo? Unoda kuziva mutengo uye kuti unoshanda sei? Muchikamu chino tichakuudza zvese 🙂
1 Chii chinonzi aerothermy
3 Kubudirira senzira yekutengesa
4 Mariermymy inodhura zvakadii
Chii chinonzi aerothermy
Chinhu chekutanga kuziva kuti rudzi urwu rwesimba chii uye kuti runoshanda sei. Iyo isimba rinowedzerwazve sosi sezvo isingapere nekufamba kwenguva uye inoshandisa mashoma magetsi. Just tinoda 1/4 yemagetsi kuti tishandise. Rudzi urwu rwesimba rwakavakirwa pakutora mukana wesimba iro mweya wekunze unofanirwa kupisa mukati medu. Kuti uite izvi, pombi yekupisa kunyatsoshanda.
Mhepo inotenderera nemuchadenga ine simba risingaperi uye rechisikigo iro rinogona kushandiswa kumisikidza-kamuri kamuri pasina kukosha kwekuishandisa zvisaririra iyo inosvibisa nharaunda uye inowedzera mari yemagetsi kupera kwemwedzi.
Usafunge zvachose kuti nekutora kupisa kubva mumhepo inotenderera panze tichaisiya ichitonhora uye ticha shandura migwagwa kuti ive nzvimbo dzechando. Zuva rakanangana nekupisa mhepo zvakare uye kuti irambe ichitenderera zvakasununguka. Nechikonzero ichi tinogona kuti simba remuchadenga isimba rinowedzerwazve sezvo risingaperi.
Kana isu tikashandisa mhepo inotonhorera yemhepo mamiriro ezvivakwa tinogona kuchengetedza kusvika 75% mumagetsi.
Iye zvino tinofanirwa kujekesa mashandiro ayo kuitira kuti pasave nekukanganiswa. Chinhu chekutanga ndechekuti chinoshandiswa nei: isimba rinowanzo shandiswa zvekugadzirisa mhepo kana kutonhodza mweya mumba. Simba iri, iro rinobviswa kubva kunze kwemhepo, rinoshandiswa kupisa kana kutonhodza mweya uri mukati meimba.
Zvese izvi zvinogona kuitwa nekuda kwepombi yekupisa. Asi haisi chero pombi yekupisa, asi imwe yemhepo-yemhando yerudzi system. Inoita basa rekutora kupisa kuri mumhepo kubva kunze uye kuchipa kumvura. Kubudikidza nedunhu rinotenderera mvura, inogona kupa kupisa kune iyo yekudziya sisitimu kuwedzera tembiricha yemukamuri. Mvura inopisa inogona zvakare kushandiswa mukushambidzika sezvinoitwa nayo simba rezuva rinopisa.
Zvichida iwe unogona kufunga kuti mashandiro emidziyo iyi haana kunyatsonaka, nekuti kuburitsa kupisa kubva kunze kwemhepo kunogona kunge kwakaoma. Nekudaro, kune zvatakatishamisa uye nekubatsira, kupisa pombi dzinoshandiswa mumhepo ine simba zvine mashandiro uye hunyanzvi hunosvika 75%. Iwo akakodzera kushandiswa munguva yechando, kunyangwe kana tembiricha yakadzika kwazvo uye kushanda kwacho hakusi kurasikirwa.
Tichifunga nezvekushanda kwayo uye shanduko yetekinoroji, simba remhepo rinoshandiswa kusimudzira dzimba dziine mhepo, zvimwe zvivakwa nezvivakwa zvidiki semamwe mahofisi.
Kubudirira senzira yekutengesa
Pakubvisa 75% yesimba remhepo uye inongoshandisa 25% yemagetsi, magetsi emhepo anova mweya wakachipa wakasarudzika sarudzo. Pamberi pa chaiwo gasi boilers kana dhiziri rinopa mikana yakawanda uye rine mukana wese wekushandisa simba rayo rinonyanya kushandiswa pachiri. Uye ndezvekuti mukana wakakura wainayo ndewekuti, uchienzaniswa nemidziyo yakajairwa, inogara ichitipa mabasa matatu akasiyana: kupisa munguva yechando, kutonhora muzhizha uye nemvura inopisa gore rese.
Kana tikatanga kuenzanisa nemamwe masosi esimba, hapana tekinoroji inokwanisa kuvhara aya matatu mabasa nenzira imwechete. Pamusoro pezvese izvi, ivo havagadziri chero mhando yekusvibisa marara, greenhouse gasi inoburitsa, kana mwenje wemoto, etc. Muchiitiko chemuchadenga hapana kupisa seanenge mune ese akajairwa masisitimu.
Mushure mezvimwe zvidzidzo zvemusika kuSpain, uchifunga nezve zvinodikanwa zvekudziya nenzvimbo, zvakagumiswa kuti michina yekupisa yemhepo inokwanisa kupisa dzimba pamutengo wakaderera 25% pasi pane gasi chaiwo masisitimu. Zvakare, kana tikazvienzanisa nemabhero edhiziri, mhepo inotonhorera ine 50% yakachipa.
Mukufamba kwenguva, zvinogona kureva kusevha kwegore rose kwema125 euros kumba kweSpain kungangoita zana metres. Kujekesa aya manhamba, zvinofanirwa kutaurwa kuti mutengo wemagetsi weavhareji imba kuSpain pagore ndeye 100 euros, ayo mairi 990 euros anoshandiswa kufukidza iwo akasiyana ekupisa mutengo. Kuwedzera mutengo wekupisa inogona kuwedzerwa kusvika pa71% mudzimba dzega-dzemhuri dzoga munzvimbo dzinotonhora kwazvo.
Mariermymy inodhura zvakadii
Kunyangwe paine kuchengetedzwa kukuru uko kunosanganisira, ndeimwe yemasimba akachena uye asinga zivikanwe anovandudzwa nevemagariro. Aerothermal inokodzera zvakakwana neese eEuropean decarbonisation marongero muna 2020, saka inova sarudzo huru kutsiva dzimwe nzira dzekudziya.
Kuchengetedza magetsi handiyo chete mukana unopihwa nesimba remhepo. Inogadzirwa neyemukati unit, yekunze unit uye tangi remvura uko mweya unoendesa kupisa kwaro. Iko kudhura kwekuchengetedzwa kwayo uye kweayo muridzi zvakangoita kwete uye hazvidi chero nguva yekudzokororwa, sezvazvinoitika nemamwe maficha ekupisa. Iyo michina inodhura pakati pe5.800 ne10.000 euros isingasanganise kuisirwa. Iko kuvandudzwa mukuita kwayo kuri kukonzera kutengeserana kwayo kupararira nekukurumidza muSpain.
Ndinovimba, nekuuya kweSpanish decarbonization marongero, masisitimu anomutsiridzwa anogona kuve anooneka mumisika yekupisa uye kutsiva tekinoroji kumashure uye nekukuvadza nharaunda zvakajairika. Wakambonzwa nezve mhepo inopisa here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Aerothermal mutengo
Sevha pane yako magetsi bhiri
Iwe unoda kuchengetedza pane yako magetsi bhiri? Wana REMAHARA € 30 dhisikaundi uchishandisa kodhi HOLA30.
Sevha ne100% green green
Kushanda kwemagetsi muzvivakwa
Mhando dzesimba rinowedzerwazve
Gamuchira izvo zvazvino zvinyorwa zvesimba rinowedzerwazve uye ecology.
Maumbirwo uye zvidzidzo